June | 2017 | | Myanmar Tech Press
ကြိုတင်အမှာပါးနိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် “EAT IN MYANMAR”
2017-06-30 2018-04-06 Admin ၀န်ဆောင်မှု
Image Source: https://www.facebook.com/eatinmyanmar/ MYEA -Myanmar Young Entrepreneurs Association “မြန်မာလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း” ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အသင်းရှိတယ်။ အတော်လေးအင်အားရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး ၂၂ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၆ မှာနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Myanmar Entrepreneurship Summit
Image Source: https://moa.com.mm/ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ Online marketing လို့ပြောရင် SNS(facebook) marketing ကရေပန်းစားပါတယ်။ Internet သုံးရခြင်းအကြောင်းအရင်းက များသောအားဖြင့် facebook ကိုအဓိကသုံးတဲ့ SNS အသုံးပြုခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် online marketing = SNS
2017-06-29 2018-04-06 Admin နည်းပညာ
သင်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေပါသလဲ? သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးပါသလား?
2017-06-28 2018-04-06 Admin Startups, ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်, နည်းပညာ
Image Source: https://www.facebook.com/fnf.myanmar Falling Walls Lab Myanmar 2017 ပြိုင်ပွဲဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ငန်း၊ ကဏ္ဍမျိုးမဆို ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အစီအစဉ်တွေ ထုတ်ဖော်တင်ဆက်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။
2017-06-28 2018-04-06 Admin နည်းပညာ
Image Source: https://www.facebook.com/FIRSTRoboticsCompetition လာမယ့်ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက်နေ့ကနေ (၁၈)ရက်နေ့အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာပြုလုပ်မယ့် First Robotics Competition 2017 စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အဖွဲ့ကလည်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။